Daawo: C/wali gaas oo maanta marka uu ku laabtay magaalada garoowe ka hadlay arimo xasaasi ah | Kismaayo24 News Agency
Saturday May 27, 2017 - 3:09 under Somali News by Tifaftiraha K24
Madaxweynaha Maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti balaadhan oo uu hogaaminayo ayaa maanta 27 May 2017 dalka dib ugu soo laabtay kana soo degey magaalada Garoowe ee caasimada Dawladda Puntland, halkaasi oo si diiran loogu soo dhoweeyey isaga iyo weftigiisa.
Madaxweynaha iyo weftiga balaadhan ee uu hogaaminayo ayaa waxaa garoonka diyaarada Kanooko ee magaalada Garoowe kusoo dhoweeyey Madaxweyne kuxigeenka Puntland Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdulaahi Cumar Camey, gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland mudane Axmed Cali Xaashi iyo kuxigeenadiisa, Maamulka degmada Garoowe, Masuuliyiin ka tirsan goloyaasha dawladda Puntland, saraakiisha ciidamada Puntland, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland iyo qaar kamida bulshada caasimada.
Madaxweynaha Puntland ayaaugu horayn ummaada muslinka ah, shacabka Soomaaliyeed iyo bulshada reer Puntlandba meelkastay joogaan ugu hanbalyeeyey bisha barakaysan ee Ramadaan, waxaana uu Illahay u weydiiyey ummadiisa inuu u denbi dhaafo Ramadaankana khayrkeeda waa fajiyo, waxaana uu madaxweynuhu ka hadlay muhiimada shirkii London oo looga hadlayey rimo la xidhiidha Soomaaliya.
Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Puntland Egn. Cabdixakiin Xaaji Cabdulaahi Cumar Camey ayaa dhankiisa kusoo dhoweyey dalka Madaxweynaha iyo weftiga uu hogaaminayey waxaana uu sheegay in dalku xasiloon yahay, isla markaana ay kajirto nabad gelyo buuxda, sidoo kale waxaa uu tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen in tii ku nafweydey shaqaaqadii ay ka geysteen cadawga Puntland magaalada Boosaaso.
Dhinaca kale Madaxweynaha Puntland ayaa isna sidoo kale ka tacsiyey intii ku geeriyootey dhibtii ay geesteen waxma garatada liita ee cadawga Soomaaliyeed, waxaana uu u tacsiyeeyey eheladii, qarabadadii iyo ciyaalkii ay ka baxeen dadkaasi.
Ugu Danbayn, Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu baaqay dadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanadda hoosyimaada degmada Buurtinle inay joojiyaan shidada iyo dhibaatada, isla markaana ay kawada shaqeeyaan nabada, xasiloonida iyo deris wanaaga.